Ku rakibida tuubooyinka FRP Soo -saarayaasha iyo Alaab -qeybiyeyaasha | Shiinaha FRP biibiile biibiile Factory
Fiilooyinka FRP waxay leeyihiin sifooyin jidheed oo aad u fiican, cufnaanta gaarka ah ee tuubada FRP waa 1.8-2.1, xoog sare, miisaanka dhuumaha FRP waa iftiin, sifooyinka jirka iyo farsamadu aad bay u fiican yihiin. Intaa waxaa dheer, is -weydaarsiga ballaarinta ee tubbada FRP wuxuu qiyaas ahaan u dhigmaa kan birta, iyo kuleylka kuleylku wuu hooseeyaa. Qalabka kuleylka iyo korontada oo wanaagsan.
Noocyada ku rakibidda tuubooyinka FRP waxaa ka mid ah xargaha FRP, suxullada FRP, shaashadda FRP, iskutallaabta FRP, dhimista FRP (madaxa FRP) iyo qalabka kale ee tuubooyinka FRP ama tuubooyinka isku dhafan ee FRP ee u dhigma tuubooyinka isku dhafan ee FRP.
Fiilooyinka FRP tuubooyinka FRP Flange
Foolooyinka isku dhafan ayaa guud ahaan ah flanges fidsan oo leh dhumuc derbi oo siman. Faa'iidada qaab -dhismeedkan ayaa ah in giraanta flange -ga iyo dhululubada si isku -dhafan loo sameeyay, iyo dhalada galaaska la xoojiyay iyo dharka waa joogto, taas oo siin karta ciyaar buuxda xoogga sare iyo astaamaha sameynta fudud ee FRP.